सुटकेसमा ३० करोड बोकेर दुबई फरार हुन लागेकी २० वर्षकी युवती तारा विमानस्थलमा यसरी परिन प्रहरिको फ’न्दामा ! - Nepali in Australia
April 19, 2021 autherLeaveaComment on सुटकेसमा ३० करोड बोकेर दुबई फरार हुन लागेकी २० वर्षकी युवती तारा विमानस्थलमा यसरी परिन प्रहरिको फ’न्दामा !
सुरक्षाकर्मीले उनका लगेजभित्र ठूलो परिमाणमा नगद फेला पारेका छन् । यो यस वर्ष यसरी पक्राउ गरिएको सबेभन्दा ठूलो रकम हो ।हान्लोनलाई मनी लण्ड्रिङको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ । उनलाई अक्सब्रिज मजिस्ट्रेटको अगाडि उपस्थित गराएर अनुसन्धानको लागि म्याद थपिएको छ । अदालतले उनलाई नोभेम्बर ५ सम्मको लागि पुलिस हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
तनहुँकाे व्यास नगरपालिका–१२ भड्खालामा रहेकाे मत्स्यकन्या आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षक तथा विद्यार्थीले दिउँसोको खाजा चार रुपैयाँमा नै खाँदै आएका छन् । ‘हम हाउस’ नामक एक जापानिज संस्थाले विद्यालयमा खाजा व्यवस्थापनका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ ।
दुई सय विद्यार्थी र १० शिक्षक शिक्षिकाले दैनिक खाजा खाँदा एक जनाको भागमा दैनिक चार रुपैयाँ पर्ने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक ललित पाण्डेले बताउनुभयो ।
विद्यालयले विगत दुई वर्षअघि सालको पातको टपरी बनाउने तालिम विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको र बाँसको डोको बुन्ने,